I-LinkedIn Inika Amandla Ukubuyekezwa Kwesimo Senkampani | Martech Zone
NgoLwesine, ngo-Okthoba 13, 2011 NgeSonto, uJanuwari 15, 2017 Douglas Karr
Enye yezinto ebengihlale ngikhala ngayo iminyaka ukuthi izinhlelo zokusebenza zezokuxhumana bezilokhu zakhiwe kucatshangelwa lowo muntu futhi azikaze zibe yisikhundla esiphezulu sebhizinisi. Ibhizinisi belilokhu lingumcabango wesibili njengoba izinhlelo zokuxhumana zenhlalo zisebenza kwimithombo yazo yemali engenayo… kepha akukaze kwenzeke ngaphambili.
Ngokujabulisayo, i-LinkedIn idubule isibhamu sokuqala futhi yanika amandla abantu abangaphakathi kwenkampani ukuvuselela ifayela le- isimo senkampani, kunokuba kube ngumuntu oyedwa. Manje usungalandela inkampani kunokuba ulandele umuntu ngamunye bese ubona izibuyekezo ezivela kuleyo nkampani! Lokhu ukwahlukana okuhle (futhi engifisa ukuthi i-Twitter ikuvumele).
Inothi elilodwa, ukuze lokhu kusebenze, uzodinga nika amandla uhlu lwe-Admin ekhasini lemininingwane yenkampani yakho. Lokho kuyisihluthulelo! Ngingeze uJenn Lisak kusuka ku- I-DK New Media futhi ngacabanga ukuthi ngizovele ngibe umphathi. Cha… manje ngivalelwe ukuphuma ekuvuseleleni inkampani yami!
Imiphumela yePoll: Sinethemba Kangakanani Nge-Apple?
Okthoba 14, 2011 ngo-6: 46 AM
Siyabonga - ukubuyekeza okuhle!